बिदेशबाट फर्केका राजु भन्छन : युट्युबमा हेरेर कुखुरा पाल्दैछु । | www.itaharifm.com.np
गृहपृष्ठ » सम्वृद्धि यात्रा » बिदेशबाट फर्केका राजु भन्छन : युट्युबमा हेरेर कुखुरा पाल्दैछु ।
Posted by Itahari Fm | error | ५४० पटक
बिदेशमा बगाउने जति रगत पसिना देशमै बगाउने हो भने आफु र देश एकसाथ बन्ने निष्कर्ष सहित स्वदेश फर्केर उद्यम गर्ने मध्ये एक हुन राजु बस्नेत । उनी बिदेशमा कमाएको केही पैसाले कृषि पेसामा केही गर्न खोजी रहेका छन् । इटहरीमा कुखुरा र हासको अर्गानीक फर्म सुरु गरेका छन् । धेरै युवाहरु फेसबुक र युट्युबमा धेरै पैसा र समय खर्ची रहेका छन् । उनीहरुलाइ फेसबुक र युट्युबको कुलतनै लागेको छ । तर राजू त्यही युट्युबमा कृषि सम्बन्धी सामाग्री हेरर नमुना कीसान बन्दैछन् । हामी उनको बि. एण्ड जि. अर्गानिक कृषि फर्म पुग्दा एउटा टहराका करिब सात सय एउटै उमेरका र एकै रंगका हासले एकै तिर हेरी रहेका थिए । हेरी रहुँ जस्तो जती हेरे पनि । बिदेशबाट फर्केर कृषि कर्ममा लागेका राजुले पनि भने कमाए राम्रै छ । यहा उनी संग रमेस पौडेलले गरेको कुराकानीको संम्पादीत अंश राखीएको छ ।
राजुजी तपाइ यो कृषी कर्ममा कहीलेदेखि हुनुहुन्छ ?
म नेपालमा केही समय शिक्षण पेसामा थिए । पढाउदा आउने पैसाले जिवीका चलाउनै पुगेन । त्यस पछि मैले बैदेसिक रोजगारीलाइ बिकल्प बनाए । कतारमा करिब ३बर्ष बसे । र मैले त्यही अठोट गरे अबनेपाल फर्केपछि बैदेशिक रोजगारीमा फर्कन्न । कीनकी मैले देखे र भोगे त्यहा जति रगत पसिना देशमै बगाउने हो भने म पनि आर्थीक रुपमा सफल हुन्छु, परिबार राम्रो हुन्छ र अन्त्यमा त देशनै राम्रो बन्छ। यही सोचे । त्यहाको कमाइले यो १० कठा जग्गा कीने । यही बस्ने ठाँउ पनि बनाएर यो अर्गानीक फर्म सुरु गरेको हुँ । मीहीनेत त छ तर परिबार संग छु । श्रीमतीले पनि सघाउछीन । यस्लाइ बढाउदै लाने सोचमा छु ।
तपाइको र्फम आधुनिक ढंगले चलेको देखिन्छ । कृर्षि सम्बन्धी प्राबिधिक सपोर्ट कस्ले गरिरहेको छ अथवा तपाइ आफै यस्को प्राबिधिक हो ?
म कृषि प्राबिधिक पनि होइन रअरु क्सैको सहयोग पनि छैन । म हरेक कुरा युटयुब र गुगलमा हेर्छु । यहाको माटो र भौगोलीक अबस्थासंग् कुन कुरा मील्छ त्यही अनुसार गर्दैछु ।
तपाईको बि.एण्ड जि. कृषि फर्मममा अहीले के के छ ?
अहिले हाम्रो फर्ममा बिभिन्न खालका कुखुरा जस्तै : छडि पलाएको कुखुरा, पखेटा उल्टो भएको कुखुरा, खुटा कालो भएको, स्याखुने जातका वा अन्य थुप्रै खालका कुखुराहरु, घरगाउँमा पाईने जस्तै हास, त्यस्तै बिभिन प्रजातिका माछा र गडैलाको आरगानिक मल, उन्तजातको बिउ बोका उपलव्द गराइराखेका छौँ । तर हामिले सम्पुर्ण सेवाहरु आफ्नै फर्ममा आउनेलाइ मात्र दिइराखेका छौँ । बजारकालागि दिने उत्पादननै आइ सकेको छैन् । कुनै बजारमा लगेर बेचेको पनि छैन । जे जति व्यपार गरीराखेकोे छु त्यो आफ्नै फमबाटनै गरिराखेको छु । दिनको १५००० देखि २०००० सम्मको हास कुखुरा बेच्दैछु ।
तपाई बिदेशमा पनि काम गरेर आईसक्नु भएको छ । बिदेशमा काम गर्नु र नेपालमा आफ्नै व्यवसाय गर्नुमा के अन्तर पाउनु भयो ?
अर्काको देशमा कामगर्दा अरुको अन्डरमा रहेर काम गर्नु पर्छ । अरुको योजनामा काम गर्नु पर्छ । आफुलाई भन्दा धेरै कम्पनिलाई फइदा दिनुपर्ने हुन्छ । आफुले गरेको श्रमको उचित मुल्यकन हुदैन । जहिले पनि हेपिएर थिचिएर बस्नु पर्ने हुन्छ । तर आफ्नो देशमा केहि व्यवसाय गर्दा आफ्नो परिवारको साथमा बसेर मालिक बनेर आफ्नो तन, मन, धन, लगाएर आफ्नो इच्छा अनुसार गरेर मनग्य आम्दामि गर्न सकिन्छ । निन्ध्रा पुगेर उठनु र आलराम लगाएर उठनुमा जति फरक छ त्यतिनै फरक बिदेशमा काम गर्नु र नेपालमा आफ्नै व्यवसाय गर्नुमा छ ।
तपाई यो कृर्षिमा चाही कसरीआउनु भयो ? को बाट प्रभाबीत हुनुभयो ?
जब म बिदेशमा काम गरिरहदा मेरो राम्रै कमाई भइराखेको थियो । त्यतिबेला म नेपाल गएर कृषि पेषामा लाग्छु भन्दा मलाइ मेरो साथिहरुले त बौलाइस कि के हो, त टुपो बाट पलाइस कि के हो, कि तलाई पैसा धेर भएको कि के हो, दुई चार बर्ष कमाको भए हुन्थ्यो, भन्नी हासोमा उडाउने गर्नुहुन्थ्यो मेरा साथिभाइ आफन्तले तर म उहाँहरुको कुरामा नलागि बिदेशमा जतिको नेपालमा पनि खटेमा राम्रो कमाई हुन्छ भन्नेमा म बिश्वस्त थिए । त्यसैले कसैको कुरा नसुनि नेपाल आएर मैले कृषि फम खोले र मैले बिदेशमा भन्दा कयै गुना ज्यादा आमदामि गरिराखेको छु । र अझै राम्रो कमाई गर्न सक्छु भन्नेमा बिश्वस्त छु ।
तर अझै पनि नेपालमा कृषि पेसा सम्मानीत पेसा हुन सकेको छैन नी हैन ?
हाम्रो देशमा कृषकलाई हेप्ने, जेकुरामा पनि पछाडि पार्ने गरीएको छ । तर अन्य देशमा यस्तो हुदैन, कृषकलाइ पहिलो प्राथामिक्ता राखीएको हुन्छ । उ आफु पनि बाच्ने र अरुलाई पनि बचाउने भएकाले हाम्रो देशमा लेडिज फष्ट भनेजस्तो अन्य देशमा कृषक फष्ट भन्ने हुन्छ । अन्य देशमा सरकारको अनुदान हुन्छ । म नेपाल आईसके पछि व्यवसाय गर्न झन्डै झन्डै हार माने । आफ्नो व्यवसाय गर्नु छ सरकारी प्रकृया र सामाजीक ब्यबहार साह्रै हेपाहा छ । अहिले सरकारले बिदेश बाट आएकालाई एति अनुदान दिने कृषकलाई एति दिने भनेर सोसल मिडियामा आइराखेको भएपनि बास्तबिक किसानले त्यो अनुदान खान सक्दैन । मैले यस्तै कुराहरु देखेको छु ।
जो तपाई जस्तै यूवा केहि व्यवसाय गर्न खोजिराख्नु भएको तर सकि राख्नु भएको छैन । उनीहरुलाइ तापाई के सल्लाहा दिनुुहुन्छ ?
व्यवसाय गर्नकोलागि सबैभदा पहिला इच्छा हुनुपर्छ, सुरुवात गर्न सक्ने आट हुनुपर्छ, मेहनत हुनुपर्छ, लगनसील्ता हुनुपर्छ, आफुले गर्न लागेको व्यवसायको बजार कस्तो छ त्यो बुझनु पर्छ, बिदेशमा भएका साथिहलाइ म केभन्न चाहान्छु भने हाम्रो देशमा पनि व्यवसाय गर्यो भने नहुने भन्ने हुदैन । बजारको माग के छ त्यसलाइ बुझेर व्यवसाय गर्नु भयो भने तपाई कहिले असफल हुनुहुन्न । र मसंग मेरो अनुभवहूको बारेमा बुझन चाहानु हुन्छ भने म मेरो अनुभव बाड्न हरपल तयार छु ।